देशका अधिकांश जिल्लाका घर भित्र अदृश्य छाउगोठ्हरु छन् – prabhab.com देशका अधिकांश जिल्लाका घर भित्र अदृश्य छाउगोठ्हरु छन् – prabhab.com
देशका अधिकांश जिल्लाका घर भित्र अदृश्य छाउगोठ्हरु छन्
Posted on February 6, 2020 February 6, 2020 / 1 बर्ष अगाडी / 992 Viewed
नेपालको सुदूरपश्चिममा मात्रै छाउपडी छैन। नेपालका सबै जिल्लामा छ छाउपडी । देशका प्राय सबै जिल्लाका महिलाले छाउपडी बार्ने गर्दछन् । फरक यति हो सुदूरपश्चिममा अछाम, बाजुरा , बझाङ , डोटी , दार्चुला लगायतका जिल्लाका महिलाहरुले रजस्वला र सुत्केरी हुदा घर भन्दा टाढा झुपडी बनाएर बस्ने चलन छ भने अन्य ठाउका महिलाले घरभित्र पनि कडा किसिमको छाउपडी बार्ने गर्दछन् ।
छाउपडी हुदा बस्ने झुपडीलाई छाउपडी कुडी भन्छन् ।देशका अधिकांश जिल्लाका घर भित्र अदृश्य छाउपडी कुडी छ ।छाउपडी हुदा घरको छुट्टै कोठामा चिसो भुईमा पराल वा थोत्रा बिस्तारा ओछ्याएर ३देखि ५ दिन सम्म सुत्नु पनि एक किसिमको छाउपाडी कुडी नै हो । छाउपडी हुदा महिलालाई भान्सा र पुजाकोठामा ५ देखि ७ प्रवेश गर्न दिइदैन । गाईको दूध, दहि , महि (गोरस) र , मुला , केरा जस्ता फलफूल खान दिईदैन छाउपडी भएको बेला यस्ता कुरा खाएमा मोच ( बच्चा खेर जाने ) हुन्छ भन्ने धारणा छ। छाउपडी हुदा घरका पुरुष सदस्यलाई छुन हुन्न भन्ने गलत सोच छ । अझ पहिलो पटक छाउपडी हुदा त दाजुभाइसङ्ग छोईन / बोल्न त परै जाओस् हेर्न पनि हुदैन भन्ने गर्छन् । छाउपडी भएको बेला प्रयोग गरिएका वा छोईएका भाडाकुडा माझेर सुकाउन लगाईन्छ । छाउपडिको बेलामा लगाएको लुगाफाटो अरुबेला लगाउन दिइदैन । धेरै जस्तो ब्राह्मण , क्षेत्री , ठकुरी लगायतका समुदायमा छाउपडी कडा रूपमा बार्ने चलन छ ।
अहिले पनि कतिपय ठाउमा पहिलो पटक छाउपडी हुदा छिमेकीको घरमा लगेर आफ्नो छोरी चेलीलाई लुकाएर राख्ने गरिन्छ । घामको मुख देख्न नहुने दाजुभाइ , बुबाले नदेख्ने गरि ५ देखि ११ दिन सम्म लुकाएर राख्ने गरिन्छ । यस्तो कुसंस्कारलाई पुरानो पुस्ताले सजिलै त्याग्न सक्दैनन् र नयाँ पुस्तालाई आफ्नो परम्परा हो भनी जबर्जस्ती बार्न लगाईन्छ ।यस्ता गलत रुढीबादी चलनले गर्दा बालिकाहरुको दिमागमा मानसिक असर पुग्ने गर्दछ । जसले गर्दा बालिकाहरु पहिलो पटक छाउपडी हुदा डराउने , रुने , चिन्तित हुने गर्दछ्न् । यो प्राकृतिक कुरा हो यस्तो बेलामा बिशेष सरसफाइमा ध्यान दिनु पर्दछ भनेर आफ्नो बालिकालाई सिकाउनु पर्नेमा झन् छोईछिटो गर्दा बालिकाहरुको दिमागमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गर्दछ ।
सुदूरपश्चिम त एउटा उदाहरण मात्रै हो । देशका अधिकांश जिल्लाका घर भित्र अदृश्य छाउगोठ्हरु छन् त्यो कस्ले भत्काउने? पहिलो पटक रजस्वला हुदा बिध्यालय जान बाट बन्चित धेरै किशोरीहरु अझै हाम्रा गाउँ, शहरमा छन् त्यस घरका अभिभावकलाई कस्ले बुझाउने ?
सुदूरपश्चिम त एउटा उदाहरण मात्रै हो । देशका अधिकांश जिल्लाका घर भित्र अदृश्य छाउगोठ्हरु छन् त्यो कस्ले भत्काउने ? पहिलो पटक रजस्वला हुदा बिध्यालय जान बाट बन्चित धेरै किशोरीहरु अझै हाम्रा गाउँ, शहरमा छन् त्यो घरका अभिभावकलाई कस्ले बुझाउने ? अभिभावक भित्र गडेको छाउ सोच कस्ले कसरी हटाउने ? प्रत्येक घरमा छाउपडी बार्ने चलन छ जस्ले जतिसुकै मै हु भनोस ठुला बडा होस् उसले आफ्नै घरमै पनि थोरै धेरै छाउपडी बारेकै छन् । त्यसलाई कसरी हटाउने ? घरका कुल देवता रिसाउने डरले आमाबाबु आफ्ना साना छोरिलाई आफुबाट अलग राख्ने कुचलन कसरी हटाउन सकिन्छ ? यो बारेमा सबैभन्दा पहिले स्वयं महिलानै जागरूक हुनु आवश्यक छ । सहि र गलत छुट्टाउन सक्ने खुबी उमेर पाकेका महिलामा हुनु आवश्यक छ । आफ्ना अभिभावकलाई आफैले सम्झाउन सक्नु पर्दछ र आफुले पनि आफ्ना छोरी बुहारीलाई यो कुप्रथा बार्न लगाउनु हुदैन ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा १६८ (३)ले रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्ने वा अन्य भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो कसुर गरेको ठहर भए तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था नयाँ कानुनले गरेको छ। रजस्वला हुँदा पोषिलो खाना खानु पर्दछ भन्ने ज्ञानको आवश्यकता छ । छाउकुप्रथा हटाउनका लागि घरका मुल ब्याक्तीलाईनै ज्ञान् दिनु पर्छ । छाउगोठ कसैले हटाएर हट्ने होइन चेतनाको स्तर संगै बिस्तारै आफै हट्ने कुरा हो । छाउपडी कुप्रथाबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बालिका तथा महिलाहरुलाई स्वास्थ सेवा तथा पोषण सम्बन्धमा जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्दछ।
छाउपडी कुप्रथा अन्त्य गर्ने ब्यक्ति परिवार समुदायलाई सम्मान गर्नुपर्दछ । छाउपडी बार्न लगाउने घरका अभिभावक , मन्दिका पुजारी , स्वयम् महिलालाई शिक्षा दिनु पर्दछ महिलाको तथा बालबालिकालाई छाउगोठमा पठाउने कार्य , छाउपडी बार्न लगाउने कार्यले महिलाहरुले आफ्नो अधिकार र स्वतन्त्रता बाट बन्चित हुनु हो । मानिसको सोचाइको स्तर वा भावनासङ्ग सम्बन्धित यस्ता कुसंस्कार सामाजिक चेतावनी वैयक्तिक चेतना बाट हटाउन सकिन्छ छाउगोठ भत्काएर होइन। ।